လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ စစ်ပညာသင်ယူရင်း PDF တပ်သားအနေနဲ့ ခံယူလိုက်တဲ့ ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီ ခေါခေါ | BurmeseAsia
Home News လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ စစ်ပညာသင်ယူရင်း PDF တပ်သားအနေနဲ့ ခံယူလိုက်တဲ့ ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီ ခေါခေါ
ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီ ခေါခေါကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ထပ်တူ ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
ခေါခေါကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့ကတည်းက ပြည်သူအားလုံး စတင်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ လမ်းပေါ်ထွက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အားဖြည့်ပါဝင်နေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..
သူကိုယ်တိုင်လည်း လမ်းမပေါ်ထွက်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မျိုးစုံပါဝင်ခဲ့သူတစ်ယောက်မို့အားလုံးက လေးစားနေရတာပါ။
ဖြိုခွင်းမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားက သွေးအေးမသွားဘဲ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အားဖြည့်ပါဝင်နေတာသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်.
ခေါခေါက လမ်းပေါ်မှာ ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်တုန်းကလည်း ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးခဲ့သလို အခုချိန်မှာလည်း PDF အဖွဲ့တွေထဲကို…ဝင်ရောက်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းတည်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေက ယနေ့ထိတိုင်ပြီးဆုံးခြင်းမရှိသေးပဲ ဆက်လက်တင်းမာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၈၀၀ကျော်လည်းသေဆုံးခဲ့ရသလို ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေလည်း ထောင်နဲ့ချီရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့် Gen Zလူငယ်လေးတွေဟာ ရရာလက်နက်ဆွဲကိုင်တော်လှန်ရင်း “ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF”တွေဖွဲ့စည်းကာ အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်……။
ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာ စစ်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီး ပြည်သူအများအပြားစစ်ဘေးရှောင်ကာထွက်ပြေးခိုလှုံနေကြရတာပါ။
အခြေအနေတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှ Gen Zလူငယ်လေးတွေအများအပြားလည်း လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုသွားရောက်ကာ PDFတပ်သားတွေအနေနဲ့ စစ်ပညာသင်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ နာမည်ကြီး social influencerတွေလည်း စစ်ပညာသင်ယူနေကြတာဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြားထဲကနေ ကြိုးစားပြင်ဆင်နေကြတာပါ။
မကြာသေးမီကလည်း ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီ Gen Zလူငယ်လေး ခေါခေါက သူ့ရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ “ငါတို့ကြိုးစားသမျှ အာဏာရှင် ပျက်သုဉ်းပါစေသား။
ငါတို့ကြိုးစားသမျှ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး တန်းတူ ရရှိပါစေသား။ PDF……” ဆိုပြီးရေးသားကာ စစ်ပညာသင်ယူနေတဲ့ပုံတွေကိုတင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
သူကဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းတည်းကတိုင် အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ရေးမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်နေ‌တဲ့သူဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး social influencerတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဖဘေု့တျဆယျလီ ခေါခေါကတော့ လကျရှိအခွအေနတှေနေဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျသူတှနေဲ့ထပျတူ ရပျတညျနသေူပဲ ဖွဈပါတယျ..။
ခေါခေါကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့လ ဖဖေျောဝါရီ ၁ရကျနကေ့တညျးက ပွညျသူအားလုံး စတငျခဲ့တဲ့ တျောလှနျရေးတိုကျပှဲကွီးမှာ လမျးပျေါထှကျလူထုလှုပျရှားမှုတှေ ပွုလုပျပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ အားဖွညျ့ပါဝငျနတောလညျး တှရေ့ပါတယျ..
သူကိုယျတိုငျလညျး လမျးမပျေါထှကျကာ လှုပျရှားမှုတှမှော မြိုးစုံပါဝငျခဲ့သူတဈယောကျမို့အားလုံးက လေးစားနရေတာပါ။
ဖွိုခှငျးမှုတှရှေိနတေဲ့ကွားက သှေးအေးမသှားဘဲ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ အားဖွညျ့ပါဝငျနတောသူလညျး ဖွဈပါတယျ.
ခေါခေါက လမျးပျေါမှာ ဆန်ဒပွတဲ့အခြိနျတုနျးကလညျး ပွညျသူတှကေိုကာကှယျပေးခဲ့သလို အခုခြိနျမှာလညျး PDF အဖှဲ့တှထေဲကို…ဝငျရောကျပွီး တာဝနျထမျးဆောငျနတော ဖွဈပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလအစပိုငျးတညျးကဖွဈပျေါခဲ့တဲ့ နိုငျငံရေးအခွအေနတှေကေ ယနထေိ့တိုငျပွီးဆုံးခွငျးမရှိသေးပဲ ဆကျလကျတငျးမာနဆေဲဖွဈပါတယျ။ အပွဈမဲ့ပွညျသူ ၈၀၀ကြျောလညျးသဆေုံးခဲ့ရသလို ဖမျးဆီးခံရတဲ့ပွညျသူတှလေညျး ထောငျနဲ့ခြီရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။
အခုလိုအခွအေနတှေကွေောငျ့ Gen Zလူငယျလေးတှဟော ရရာလကျနကျဆှဲကိုငျတျောလှနျရငျး “ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျ PDF”တှဖှေဲ့စညျးကာ အာဏာရှငျစနဈကိုတျောလှနျနကွေတာဖွဈပါတယျ……။
ခငျြးပွညျနယျ၊ကယားပွညျနယျ၊ကရငျပွညျနယျနဲ့ ကခငျြပွညျနယျတို့မှာ စဈပှဲတှဆေကျတိုကျဖွဈပျေါနတောဖွဈပွီး ပွညျသူအမြားအပွားစဈဘေးရှောငျကာထှကျပွေးခိုလှုံနကွေရတာပါ။
အခွအေနတှေပွေငျးထနျလာတာနဲ့အမြှ Gen Zလူငယျလေးတှအေမြားအပွားလညျး လှတျမွောကျနယျမွကေိုသှားရောကျကာ PDFတပျသားတှအေနနေဲ့ စဈပညာသငျယူနကွေတာဖွဈပါတယျ။ အနုပညာရှငျတှနေဲ့ နာမညျကွီး social influencerတှလေညျး စဈပညာသငျယူနကွေတာဖွဈပွီး ဆငျးရဲဒုက်ခတှကွေားထဲကနေ ကွိုးစားပွငျဆငျနကွေတာပါ။
မကွာသေးမီကလညျး ဖဘေု့တျဆယျလီ Gen Zလူငယျလေး ခေါခေါက သူ့ရဲ့ Facebookစာမကျြနှာမှာ “ငါတို့ကွိုးစားသမြှ အာဏာရှငျ ပကျြသုဉျးပါစသေား။
ငါတို့ကွိုးစားသမြှ တိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေး တနျးတူ ရရှိပါစသေား။ PDF……” ဆိုပွီးရေးသားကာ စဈပညာသငျယူနတေဲ့ပုံတှကေိုတငျပေးလာခဲ့ပါတယျ။
သူကဖဖေျောဝါရီလအစပိုငျးတညျးကတိုငျ အရေးတျောပုံကွီးအောငျမွငျရေးမှာ တကျတကျကွှကွှပါဝငျနေ‌တဲ့သူဖွဈပွီး နာမညျကွီး social influencerတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျရေးသားဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
Previous articleငယ်ငယ်က ကိုယ့်ကိုစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမကို လမ်းဘေးမှာ သူတောင်းစားအဖြစ်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ
Next articleကမ္ဘာ့ အလှဆုံး အယောက် (၁၀၀) ရဲ့ ဆန်ခါ တင်စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ မေမြင့်မိုရ် ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို